Magacyada iyo beelaha ay kasoo jeedaan xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Cadaado – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Magacyada iyo beelaha ay kasoo jeedaan xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Cadaado
Waxaa maanta magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug lagu qabtay doorashada xubnaha Galmudug u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Doorashadaan oo xiiso gaar ah lahayd ayaa waxaa ku tartamayay musharixiin badan, waxaana maanta lagu doortay ilaa 2 xildhibaan, inkastoo lagu balansanaa in la doorto 6 xildhibaan balse ay arrinkaasi dib ugu dhacday maalinta berri arrimo farsamo awgeed.
Labada xildhibaan ee maanta la doortay ayaa waxay kala ahaayeen sida soo socoto:-
1- Duniyo Maxamed Cali oo u dhalatay beesha Dir/Surre ayaa ku guuleysatay kursiga koowaad, kadib markii ay tanaasushay haweeneydii iyada la tartameeysay, waxayna kusoo baxday cod gacan taag ah oo ay sameeyeen ergada doorashada ka qeyb galeysay.
2- Cabdi Shire Jaamac (Ciyaarjecel) oo u dhashay beesha Mareexaan/Wagardhac, ayaa la tartaameeysay seddax musharixiin kale, wuxuuna helay 29 cod.
Ugu dambeyntii, Guddiga doorashada ayaa sheegay in maalinta berri la dhameystiri doonno xubnaha maanta dib uga dhacay doorashada arrimo farsamo awgeed, waxaana la filayaa in doorashadaasi ay bilaabato xilli hore, si loo sii amba-qaado waxyaabaha kale ee weli harsan.